ကိုယ့်အချစ်ကိုကြိုးကွင်းစွပ်သူ | PoemsCorner
ကျွန်မ…သိပ်အများကြီး မတောင်းတဖူးပါဘူး ….
အချစ်စစ်စစ်ဆိုတဲ့ ရေကျော်ဈေးက ရေထုိးချိန်ပြည့် ကြက်သားလိုအချစ်ကိုပဲ .. မူးမူးမက်မက်ကိုးကွယ်ခဲ့ဖူးသူပါ … သစ္စာဆိုတဲ့ စကားကိုလဲ … အခြောက်မကြီးအား အကိုလို့ခေါ်ရသလို အီလည်လည်နဲ့ …ယုံခဲ့ဖူးသူ တယောက်ပါ …
ကျွန်မ….သိပ်အများကြီး….မတောင်းတ တော့ပါဘူး …
ရုပ်ရှင်ဆန်ဆန်သဲသဲလှုပ်ချစ်ပြတဲ့ အချစ်ဆိုတာ … ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရဲ့ ချစ်ခြင်းသံစဉ်ပဲ ဖြစ်မှာ … ကျွန်မ ကိုယ့်ဘ၀မှာ ကိုယ်ပျော်နေတာရယ် … တခါတခါ သူ့ချစ်သူဆိုပြီး နာမည်တပ်ထားသော မမဆီကို သွားသွားပြီး .. သူ့အကြောင်းတွေတိတ်တိတ်လေး ဘယ်သူ မှ မသိအောင် ခိုးခိုးကြည့်တတ်တာရယ် ကလွဲလို့ ပေါ့လေ …
ကျွန်မ .. သိပ်အများကြီး …တောင်းဆိုခွင့်မရှိပါဘူး …
ပုံစံပေးခံထားရတဲ့ တပ်သားတယောက်က… အမိန့်ဆိုတာကြီးကို ဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင် ကြောက်ရတဲ့အခါမှာ … အချစ်ဆိုတာက .. ရေနစ် တဲ့အချိန်မှာ ဆွဲထားတဲ့ ဆွဲကြိုး တစ်ကုံးလိုပဲ ..လေးလိုက်တာ…. သေခါနီးအချိန်မှာ သိက္ခာဆိုတာမရှိပါဘူး …လူဆိုတာ သတ္တ၀ါဟာ ကျွန်မပဲလေ …
ဟုတ်ပါတယ် … ကျွန်မ ခပ်ညံညံ ခပ်ထုံထုံမိန်းမတယောက်လေ …. ကိုယ့်အချစ်ကို ကိုယ် ကြိုးကွင်းစွပ်တာ .. သူပေါ့ …
In: ကဗျာ Posted By: ကဗျာချို Date: Oct 6, 2012
Leave comment 1 Comment & 255 views
By: ei lay at Oct 14, 2012